Amerika Latina · Oktobra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Oktobra, 2008
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Oktobra, 2008
Brezila: Ho amin'ny hetsika hanoherana ny fandemen-tsaina ataon'ny fampahalalam-baovao
Brezila 21 Oktobra 2008
Eduardo Guimarães [pt] mpikambana mpanorina ny Movimento dos Sem Mídia [Fiaraha-mientan'ny adinon'ny Media (fampitam-baovao)] no miantso ny olom-pirenena handray anjara amin'ny hetsika hanoherana ny familiviliana sy fanodikodinana ny marina ataon'ny fampahalalam-baovao any Brezila. “Mbola manolo-kevitra indray aho ny hanaovana ity bolongana ity ho fitaovana entina amim-pilaminana, handraisan'ny olom-pirenena anjara hiampangana...
Paragoay: Tolobidina voromby hoan'ny filoham-pirenena
Paragoay 16 Oktobra 2008
Te-hividy voromby ho an'ny filoham-pirenena ny filoha Paragoaiana Fernando Lugo hanatontosany fitsidihana iraisam-pirenena. Tsy manohitra ireny fitsangatsanganana ireny i Carlos Rodríguez ao amin'ny Rescatar [es] fa lainy kosa ilay vidiny $7 000 000, ka aleo mitandrina kokoa hanofa raha izany, hoy izy.
Brezila 16 Oktobra 2008
Manamboninahitra ambony ao amin’ny polisy no olona voalohany nampidirina am-ponja noho ny fanehoan-kevitra tamin’ny bolongana tany Brezila. Indreto ary torotoro ravina teo amin’ny tontolom-bolongan’ny polisy avy amin’izany fisehoan-javatra izany. Tsy atao mahagaga loatra, noho ny torolalana amin’ny fampianarana mamahana bolongana sy maneho hevitra (miafina sy tsy fantatra toerana ipetrahana), raha maro amin’ny manamboninahitra no mamaham-bolongana tsy mitonona anarana.
Venezoela 06 Oktobra 2008
Shily 06 Oktobra 2008
Mpianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa manokana no namoaka lahatsary fohy mitondra ny lohateny hoe "Mitandroka (Bullying)" mba hizarany ny fomba fijeriny momba ny famonoantena eo amin'ny tanora sy izay mety ho antony hanaovana izany. Tamin'ny alalan'ny fihetsiky ny vatana sy ny tava maneho hevitra no tena nandefasany ny hafatra, handravana ny elanelanan'ny tsy fifankahazoana fitenenana ka nataony izay hahazoan'ny rehetra ny lahatsary fohy novokariny.
Kolombia 06 Oktobra 2008
Aostralia 04 Oktobra 2008
Taorian'ny fanavotana ireo olona be mpahalala 15 azo takalon'aina teo ampelatanan'i FARC tamin'ny 2 jolay, dia nanapa-kevitra indray ny fikambanana izay efa nanao diabe nanoherana ny Vondrotafika revolisionera Kolombiana(FARC) tamin'ny 14 feboroary fa tokony hisy indray izany ny 20 jolay, androm-pahaleovantena nisitahana tamin'i Esipaina. Ny lahatsary sy ny sary no maneho ny fomba nankalazana ny fahaleovantena sy ny fanafahana avy amin'ny vazantany efatra, sy izay mifangarika amin'ny dikan'ny teny hoe firenena sy fahafahana.
Nikaragoà: Tarika tsy mijoro ara-dalàna mahazo fanohanana ara-bola
Nikaragoa 01 Oktobra 2008
Ampangain'ilay mpamaham-bolongana Nikaragoana Ingrid Bergman ny tarika (mpihira) maromaro tsy manana fijoroana ara-panjakana nefa dia tsy manana olana amin'ny fahazoana fanohanana ara-bola mihoa-mpampana. Ao amin'ny bolongana Sweet Orchid (voninkazo mamy) no anondroan'ny mpanoratra fa mahazo fanohanana ara-bola avy any ivelany saingy antsoiny fa “fanasana vola azo tamin'ny tsy rariny” ny...